Blog of Nyein Chan Yar: 2009.09
Posted by Daythanix Chann at Saturday, September 26, 2009 No comments:
On September 18, 1988, after military seized power and opened fire on peaceful, student-led pro-democracy protesters, killing an estimated 3,000 people. There isafamous photo taken on September 19, 1988, whenaschoolgirl, Win Maw Oo was shot and two young doctors carrying her to save her life. Here is the article of these two doctors, Dr. Saw Lwin and Dr. Min Thein, in this photo.
You can read the complete article at Irrawaddy.
A Country of Fallen Stars By KHIN NYEIN THIT
Posted by Daythanix Chann at Saturday, September 19, 2009 No comments:
ခေါငျးစဉျက တဈခုတညျးတပျထားပမေယျ chrome browser နဲ့ပါတျသတျတာလေးတှေ topic သုံးခုလောကျ ပွောစရာရှိပါတယျ။
အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး Chromium ဆိုတာကတော့ open source project လေ။ အဲ ဒါကနမှေ chrome plus ဆိုတာကို လုပျထားတာပါ။ [via ghacks] လောလောဆယျ version က Chromium version 3.0.193 ကို အခွခေံပါတယျ။ google official chrome ထကျပိုကောငျးတာကတော့ အဓိကအားဖွငျ့ mouse gesture ပါပဲ။ link တဈခုကို new tab မှာဖှငျ့ခငျြရငျ link ကို ဘေးနားတဈနရောရာကို drag လုပျရုံ ပါပဲ။ back ကိုသှားခငျြရငျ right click ကို ဘယျဘကျကို drag လုပျပါ။ forward ဆို ညာဘကျ ဆှဲ။ close tab ဆို လညျး အောကျညာဘကျ ကိုဆှဲရုံပဲလေ။ နောကျ IE tab ဆိုတာက တခြို့ webpage တှကေ IE နဲ့မှ အဆငျပွမေယျဆိုရငျ icon လေးနဲ့ ပွမယျတဲ့။
နောကျထပျ အကြိုးကြေးဇူးတဈခုကတော့ နောကျ topic မှာဆကျပွောမယျ။
တဈခြို့ software တှကေ ဘာသဘောလဲကိုမသိဘူး၊ installer package အပွညျ့ download ပေးမလုပျဘူး။ သေးသေးလေး တဈခု download လုပျရတယျ။ အဲ့ဒါလေး ဖှငျလိုကျရငျမှ သူက တကယျ့ software ကို သူဟာသူ download လုပျ ပွီး install လုပျသှားတယျ။ အကြိုးမဲ့တာတော့ မပွောနဲ့တော့။ connection မကောငျးလို့ ပွီးခါနီး တနျးလနျးကွီး ရပျသှားရငျ ပွီးရော။ အစကပွနျစ။ နောကျ installer ကို သိမျးထားလို့ မရဘူး။ (တဈခြိုဟာတှတေော့ temp ထဲမှာ သှားရှာလို့ရဖူးတယျ။)
ကဲ... chrome installer ကို သိမျးထားခငျြရငျတော့ chrome plus လေးက ပွလေညျစပေါလိမျ့မယျ။
မနကေ့မှ သိတာတဈခုက google official chrome ကိုလညျး download လုပျလို့ရ ဆိုပဲ။ ဒီလိုလုပျရတယျတဲ့။ URL မှာ standalone=1 ဆိုတာ ထညျ့ပေးရတယျတဲ့။
Latest beta: http://www.google.com/chrome/eula.html?extra=betachannel&standalone=1 [via ghacks]
ကြှနျတျောတော့ စမျးမကွညျ့ပါဘူး။ chrome plus ရှိသားပဲ။
ကြှနျတျောအကွိုကျဆုံးကတော့ Portable ဖွဈတဲ့ဟာပဲ။ browser တှမှော profile က အရေးကွီးပါတယျ။ windows reinstall လုပျလို့ပဲဖွဈဖွဈ။ computer အသဈဝယျလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ internet ဆိုငျသှားလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ Portable Chrome လေးကတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ May your browser profile be always with you. :P
PS: နောကျမှ portable firefox လုပျနညျးလေး ရေးပါအုံးမယျ။
ခေါင်းစဉ်က တစ်ခုတည်းတပ်ထားပေမယ် chrome browser နဲ့ပါတ်သတ်တာလေးတွေ topic သုံးခုလောက် ပြေါစရာရှိပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Chromium ဆိုတာကတော့ open source project လေ။ အဲ ဒါကနေမှ chrome plus ဆိုတာကို လုပ်ထားတာပါ။ [via ghacks] လောလောဆယ် version က Chromium version 3.0.193 ကို အခြေခံပါတယ်။ google official chrome ထက်ပိုကောင်းတာကတော့ အဓိကအားဖြင့် mouse gesture ပါပဲ။ link တစ်ခုကို new tab မှာဖွင့်ချင်ရင် link ကို ဘေးနားတစ်နေရာရာကို drag လုပ်ရုံ ပါပဲ။ back ကိုသွားချင်ရင် right click ကို ဘယ်ဘက်ကို drag လုပ်ပါ။ forward ဆို ညာဘက် ဆွဲ။ close tab ဆို လည်း အောက်ညာဘက် ကိုဆွဲရုံပဲလေ။ နောက် IE tab ဆိုတာက တချို့ webpage တွေက IE နဲ့မှ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် icon လေးနဲ့ ပြမယ်တဲ့။ နောက်ထပ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ နောက် topic မှာဆက်ပြေါမယ်။
တစ်ချို့ software တွေက ဘာသဘောလဲကိုမသိဘူး၊ installer package အပြည့် download ပေးမလုပ်ဘူး။ သေးသေးလေး တစ်ခု download လုပ်ရတယ်။ အဲ့ဒါလေး ဖွင်လိုက်ရင်မှ သူက တကယ့် software ကို သူဟာသူ download လုပ် ပြီး install လုပ်သွားတယ်။ အကျိုးမဲ့တာတော့ မပြေါနဲ့တော့။ connection မကောင်းလို့ ပြီးခါနီး တန်းလန်းကြီး ရပ်သွားရင် ပြီးရော။ အစကပြန်စ။ နောက် installer ကို သိမ်းထားလို့ မရဘူး။ (တစ်ချိုဟာတွေတော့ temp ထဲမှာ သွားရှာလို့ရဖူးတယ်။) ကဲ... chrome installer ကို သိမ်းထားချင်ရင်တော့ chrome plus လေးက ပြေလည်စေပါလိမ့်မယ်။ မနေ့ကမှ သိတာတစ်ခုက google official chrome ကိုလည်း download လုပ်လို့ရ ဆိုပဲ။ ဒီလိုလုပ်ရတယ်တဲ့။ URL မှာ standalone=1 ဆိုတာ ထည့်ပေးရတယ်တဲ့။
ကျွန်တော်တော့ စမ်းမကြည့်ပါဘူး။ chrome plus ရှိသားပဲ။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ Portable ဖြစ်တဲ့ဟာပဲ။ browser တွေမှာ profile က အရေးကြီးပါတယ်။ windows reinstall လုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်။ computer အသစ်ဝယ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ internet ဆိုင်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Portable Chrome လေးကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ May your browser profile be always with you. :P download portable-google-chrome-3-0-195-10
နောက်မှ portable firefox လုပ်နည်းလေး ရေးပါအုံးမယ်။ Portable Freeware
Posted by Daythanix Chann at Wednesday, September 09, 2009 No comments:
Labels: freeware, open source, portable